Halala Mdasbee VW club, amaqhawe – Ntu News
Halala Mdasbee VW club, amaqhawe
October 18, 2021 October 18, 2021 Jasmin Rose	0 Comments	Mdasbee VW Club
UThandokazi Qalivane uhlala nomyeni wakhe kunye nabantwana bakhe abasithandathu,apho abathathu ngamawele anenyanga ezintathu. Uhlala egqobhasi kwityotyombe elivuzayo, elinamagumbi amabini kuphela. Usisi lona akanayo ipasile yokwenza isibonelelo sabantwana, kwaye ubisi lwentsana zakhe ulifumana ndzima kuba liphuma emakhiwane kwaye kukude. I-Mdasbee VW club ithathe amanyathelo okunceda olusapho lwase gqobhasi kulomgqibelo uphelileyo. Usihlalo walombutho uLulama Giba, ubone imeko yolusapho wathatha inxaxheba yokwazisa nokunceda ekuncedeni olusapho. Baye baliza olusapho nge zinto eziyimfuneko zamasana kunye nokutya, neezitovu ezimbini ezindidi zihlukeneyo nokunye okuninzi. Uthi usisi Thabdokazi, amalungu e-Madasbee VW club aye amnceda ekufumaneni ipasi kunye ne nesibonelelo sabantwana. Uyabulela kakhulu ngendlela ancedwe ngayo kwaye uyavuya ukuba ede wafumana uncedo kulemeko ebekuyo.
I-Mdasbee VW club iqalwe kunloyaka uphelileyo, ngeenjongo zotshintsha indlela abantu bababona ngayo abanikazi be moto I-VW. Le klabhu iyabaququzela abaqhubi ukuba balendele imigaqo yendlela kwaye bangaqhubi ngaphantsi kwempembelelo zotywala. Zininzi iindlela abazama ngazo ukunceda abantu bokuhlala ukuze baguqule iintlalo zabantu, ngengokunceda ulutsha kwezemidlalo nokunye okuninzi. Umntu ofuna uncedo okanye ofuna uncedisa, angaxhomana nabo abazise ngembilini yakhe. Iklabhu ayinazo iindleko ezaneleyo zokunceda uwonke wonke, kodwa baye bazame ukunceda apho bakwazi khona. Imali bayikhupha kubo ezipokothweni, kunye neminikelo abayifumanayo ngalomaxesha.
Ukuba unomdla wokunceda okanye ukuncedwa ungaxhomana nabo ku- facebook wabo u-Mdasbee VW club. Kwaye bayafumaneka nakunomyayi wonxibelelwano apho basebenzisa inombolo zesithethi sabo umnomzana uKhululekile Mladu ku-‪0734433080‬, nakwezika sekela sihlalo umnomzana uSipho Makuliwe ku-‪0824748119‬.
← Talent Muchegwa, Greatman shines at 2021 National Disability Expo
EMALAHLENI MUNICIPALITY HOSTS A GIFT OF THE GIVERS →
Thembani Special Day Care in Need of Assistance